Thola ukuthi ungalikhetha kanjani usofa ongcono kakhulu wegumbi lakho lokuphumula | Bezzia
Khetha usofa wakho wendawo yegumbi lokuphumula
USusana Garcia | 29/03/2021 20:00 | Umhlobiso, Ifenisha
El usofa ucezu olubaluleke kakhulu empilweni yethu, ngoba kuyisikhala sokunethezeka. Yindawo lapho siphumula khona lapho sifika ekhaya futhi yingakho kufanele kube yingxenye esemqoka yomhlobiso wethu. Ukukhetha usofa wendawo yegumbi lokuphumula kungumsebenzi onzima ngoba kufanele sikhethe kahle isitayela, indwangu noma umbala, kanye nosayizi nenduduzo.
Sizobona imibono ehlukile lapho uhlobisa igumbi lokuphumula ngosofa abakhulu. Le fenisha ibaluleke kakhulu egumbini lokuphumula, indawo yayo emaphakathi kakhulu nokuthi yini eqala ukudonsa amehlo, ngakho-ke kufanele siyikhethe kahle. Kunezinhlobo eziningi zosofa yingakho sinokuningi esingakhetha kukho.
1 Usofa wesikhumba
2 Usofa Vintage
3 Chaise longue usofa
5 Osofa Modular
6 Amathoni angathathi hlangothi egumbini lokuphumula
I-Los osofa besikhumba yizicucu ezihlala isikhathi eside uma sibanakekela njengokufanele. Kulula ukuyihlanza futhi ihlale iminyaka neminyaka. Kulokhu, ukuthenga lolu hlobo losofa kungukutshalwa kwemali okuhle. Zibiza kakhulu kepha zihlala isikhathi eside kakhulu kunezendwangu. Yingakho kulokhu kungcono ukhethe ucezu ngesitayela esijwayelekile nesilula esingaphumi esitayeleni. Kulokhu sibona eyodwa ngamathoni ansundu kodwa kukhona nesikhumba ngamathoni aluhlaza noma amnyama. Kubonakala ngathi isiqeshana esihle nenhle.
Isitayela sokuvuna singaba yisinqumo esihle segumbi lethu lokuphumula. Uma ungeze enye ifenisha yasendulo ungafaka usofa wokuvuna. Lezi zivame ukwenziwa ngesikhumba esikhulile nesikhumba futhi zihlala isikhathi eside kakhulu. Banobuningi bezinhlamvu yize kufanele ungeze amanye amakhushini ukudala umehluko nokuthinta okuthambile. Uma amakhushini enokuthinta kwesimanje, sizokwazi ukudala umehluko othile ukuvuselela isitayela sikasofa.
Chaise longue usofa
Enye ye Osofa abantofontofo ongabathenga yibo abane-long chaise. Lolu hlobo losofa luphelele uma sinesikhala egumbini lokuphumula, ngoba lisivumela ukuba silale phansi ngokuphelele. Enye yezinketho ezinhle kakhulu uma uthanda ukuchitha isikhathi esiningi kusofa yileloise ye-chaise. Thenga usofa emthunzini ongathathi hlangothi futhi uzokujabulela lokhu ucezu iminyaka ezayo. Kulokhu bakhethe ithoni emhlophe, yize kukhethwa imibala ehlukahlukene kakhulu enjengempunga.
Una umqondo onesibindi ukukhetha usofa kumathoni amnandi noma enhle eheha ukunakwa. Ngaphandle kokungabaza kuyindlela eyingozi ngoba kufanele sihlanganise umbala wosofa nakho konke okunye ukuhlobisa. Ungahlanganisa amakhushini ukuwenza aqhathanise futhi uhlanganise imibala ehlukahlukene ngendlela ejabulisayo neyangempela. Lesi, isibonelo, sinokuphuzi okukhulu okuheha ukunakwa futhi kwenze usofa ucezu olubaluleke kakhulu egumbini lokuphumula.
Uma ufuna eyodwa umqondo oguquguqukayo kakhulu ngoba ufuna ukuguqula isikhala ngendlela oyithandayo, lapho-ke siphakamisa osofa abakhulu bama-modular. Lezi zinhlobo zosofa zakhiwa yizicucu kumiklamo elula kakhulu, enemigqa eyisisekelo kuphela. Imvamisa zithengiswa ngamathoni ayisisekelo futhi ukuze zihlangane kalula. Abanye banemihlane kanti abanye abanayo, ukuze kudalwe ama-chaise longue noma amasofa. Kungumqondo omnandi futhi okhetheke kakhulu kunoma iliphi igumbi lokuphumula.
Amathoni angathathi hlangothi egumbini lokuphumula
Omunye wemibono emihle kakhulu ye- noma yiluphi uhlobo lwegumbi lokuhlala likhetha usofa ngamathoni ayisisekelo. Lo mbono uhlala usebenza, ngoba uyisiqeshana esizohambisana nakho konke. Umbala ompunga uthandwa kakhulu manje futhi kulula ukuwuhlanganisa, kanye nokuba umbala lapho ukusetshenziswa kungabonakali kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Khetha usofa wakho wendawo yegumbi lokuphumula
Izihloko ezi-5 umbhangqwana okungafanele neze uxoxe ngazo
Izitayela zokugqoka zentwasahlobo ezingakugqugquzela